Elmo kaThixo 1BR Ilungele Trail Adventures yakho
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguJoan
Zithande iindlela zethu zeLaurel Highlands kunye nembali ukusuka kwindawo yethu yokufikelela ngokulula ukusuka kwiNdlela yoMkhukula weNdlela yeNdlela kunye neMizuzu eli-10 ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya saseMurtha. Indawo yethu encinci inayo yonke into oyifunayo ukwenza ukuhlala kwakho kusebenze kubandakanya indawo yokupaka esitratweni kunye neW / D. Iindawo ezintlanu zeMbali yeSizwe / izikhumbuzo zikufuphi, kunye neekhilomitha zeendlela zokukhwela ibhayisekile, ukunyuka kunye neendlela zomzila omnye ukuya kwibhayisekile yasentabeni, ukuzingela, ukuloba, ukutyibiliza ekhephini kuninzi, kunye nemilambo yethu kunye neGreenhouse Park enikezela ngolonwabo lwamanzi nayo.
Esi sisikhululo sangaphambili senkonzo .25 yeemayile ukusuka kwindlela yokuvula/yokuvala yaseRt. 219. Yindawo yabucala kumgangatho we-1 wesakhiwo sebhloko sebali eli-2. Yakhiwa ngeminyaka yee-1930s ayifikeleleki kwi-ADA. Kukho ibhedi egcweleyo enezinxibo ezikhoyo. Ikhitshi libonelelwa ngezinto ezisisiseko ezifana nezitya, izixhobo, kunye nezinto zokupheka ezilula (akukho sitovu - i-hotplate yesitshisi esi-2, i-oven ye-toaster kunye ne-microwave ziyafumaneka).
Indawo yokuhlala ezolileyo kunye ne-trout yokukhulula umjelo ngaphandle komnyango wakho malunga neemitha ezingama-50 kude. Esi sakhiwo sasisakuba sisikhululo senkonzo esakhiwa ngeminyaka yoo-1930 ukuze sincede abahambi ecaleni kwendlela engundoqo eyayiyi-Amsite Rd kwicala lesakhiwo yaye yayisebenza ngeminyaka yoo-1970 inceda abahambi kwindlela engu-53 phambi kwesakhiwo, njengoko nenjenjalo. ufumane ingxolo yendlela, kodwa i-apt isemva kwe-bldg kuyo ingaphantsi. Indlela yoMkhukula weStinemans Trailhead inqumla ngqo kwi-Rt. 53 kwaye ekunene. Yindlela entle ephuhlileyo etyhutyha emahlathini nangaphaya kwendawo enemigodi ebuyisiweyo eli candelo lizimayile ezi-1.55 kwaye ungaqhagamshela ne-trailhead yase-Fifficktown ekhokelela kwi-Mineral Point uze udlule kwiSiza seMbali yeSizwe-i-Staple Bend Tunnel ezantsi ukuya e-Johnstown.
Iziko leSizwe leSikhukula seSikhumbuzo sika-1889 liziko elikufutshane lokuya eSidman. Uya kufumana ukutya okuhle kwi-Smiley's Tavern e-St. Michael (evaliweyo ngeeCawe) kunye ne-Morris' Tavern e-Sidman zombini zikufuphi. IDowntown iJohnstown kukuhamba okufutshane nokuba unyuke iRagers Hill Rd (ukuhlala ekhohlo xa ufika phezulu) okanye 219S...iqhayisa ngeendawo zokutyela eziphucukileyo eziquka iBalance kunye neStonebridge Brewery kunye neRichland 219S ineTap 814 kunye ne814 Lanes (leyo unendawo yokutyela elungileyo).
Kuninzi ukubona kwaye wenze ukuba uthanda ngaphandle kunye nembali. I-Johnstown ikwasindleke kwiminyhadala yomculo emangalisayo, imiboniso yezandla kunye neminyhadala yeenqobo ezisesikweni kuquka nendiyithandayo, iPolkafest kaJuni!
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- South Fork